eNasha.com - पारदर्शी चुलोको कमाल
तपाइँलाई पाउरोटी सेक्न आउँदैन ? भैगो, चिन्ता गर्नु पर्दैन । पाउरोटी सेक्दा तपाइँको हात पोलेको होला, घाउ बनाएको होला, पाउरोटी डढेर कालो भएको होला र खाँदा तीतो भएको अनुभवसमेत गर्नु भएको होला । तर अब तपाइँको समस्या समाधान हुने भएको छ ।
संसारकै पहिलो पारदर्शी पाउरोटी सेक्ने चुलो बनेको छ ।
शिशाले बनेको यो 'ग्लास टोस्टर'का कारण तपाइँले सेतो पाउरोटी, खैरो हुँदै गएको र डढेको समेत देख्न पाउनु हुनेछ र यो डढेर खरानी हुनुअघि नै यसलाई निकालेर आफ्नो सफा प्लेटमा पस्किन सक्नु हुनेछ । यसलाई इनेभिटेबल्स नामक सामान डिजाइन गर्ने कम्पनीले नमूनाका रुपमा बनाएको छ ।
शिशाले एउटा पाउरोटी डढुञ्जेलसम्मको ताप खप्न सक्छ र खासगरी एउटा शिशाले कतिसम्मको तापमानलाई सहन सक्छ भन्ने कुराको प्रयोग गर्दागर्दै यसको आविष्कार हुन पुगेको हो ।
अब जनताहरुले डढेको पाउरोटी खानुपर्ने बाध्यता वा फ्याँक्नुपर्ने बाध्यता पर्ने छैन ।
रोचक कुरा के छ भने यसमा पुरानो टोस्टरको झैँ समयतालिका मिलाइएको छ । र, तोकिएकै समयमा यसले पाउरोटीलाई फुत्त बाहिर निकालिदिन्छ । यसले भान्सामा ज्यादै व्यस्त रहनेहरुका लागि उपयोगी सिद्ध हुने गरेको छ ।
तर यसको एउटै मात्र दुर्गुण के छ भने, यो भाँडोमा एक पटकमा एउटा मात्र पाउरोटीलाई तताउन सकिन्छ । दुइ वटा हाल्न खोज्यो भने चाहिँ तपाइँलाई अर्कै समस्या पर्न सक्छ ।
उपाय यस्तो पनि ! प्रविधि माया सुन्दरी सेलेब्रिटी मुद्दा मामिला मूर्ख्याइँ इन्टरनेट गुगल बलिउड भव्यता विज्ञापन नग्नता श्रीमानश्रीमती कीर्तिमान परिस्थिति फट्याइँ उदेकलाग्दो हलिउड